Madaxwaynaha DDSI Oo Abaal marin Xafiiskiisa Kaga Guddoomay Maareeyaha Guud Ee Shirkada Isgaadhsiinta Dalka Ethio-Telecom - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Abaal marin Xafiiskiisa Kaga Guddoomay Maareeyaha Guud Ee Shirkada Isgaadhsiinta Dalka Ethio-Telecom
Jigjiga(CN) Arbaco, 19ka August, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo saaka xafiiskiisa ku qaabilay wafti uu hogaaminayo Maareeyaha Guud Ee Shirkada Isgaadhsiinta dalkeena Itoobiya mudane Andualem Admase ayaa halkaa kaga guddoomay billad abaal marin ah.
Abaal marintan oo ka turjumaysa kaalinta laxaadka leh ee ay guud ahaan hay'adaha nabadgaliyada deegaanka gaar ahaana boolisku ka qaateen soo af-jaridii musuqii teleega, hirgalinta dhismayaasha xidhiidhinta anteenooyinka ee qabalee, degmo ilaa gobol iyo gaadhida isticmaalka nooca isgaadhsiinta tayada saraysa ee 3Gga.
Kulankan oo qaatay mudo gaaban ayuu madaxwaynuhu kusheegay in isticmaalka teleefanka gacanta ee laga hirgaliyay deegaanku ay kaalin wayn kaqaadatay soo af-meeridii ururkii nolol iyo nabadba diidka ahaa ee UBBO. ''Waayo, iyaga unbaa dadka ukala warami jiray oo barobagandho aan waxba kajirin ugudbin jiray dadkanaga qurbaha kunool balse shaqsi kasta oo u dhashay deegaanku meeshuu joogu ayuu maanta saacad walba kaga warhayaa xaalada deegaanka. ''ayuu yidhi madaxwaynuhu.
Maareeyaha guud ee shirkada Ethio-telecom ayaa isna dhankiisa uga mahadceliyey madaxwaynaha hirgalinta nidaamka xidhiidhinta antenoyinka khadka hawada ee deegaanka, fulinta nooca khadka loo yaqaano 3Gga iyo guud ahaan isbadalka horumarineed ee deegaanka kahanaqaaday.
Ugudanbayna, waxaa kulankan kasoo baxay in shirkadu ay mudo gaaban kusoo gabagabayn doonto anteenooyinka u hadhay dhawrka degmo iyo waliba inay shaqo abuur usamaynayso dhalinyarada uqalinjabisa deegaanka iyadoo udhisi doonta nidaam iskaashato oo shan ilaa toban xubnood ah. Kana caawin doonta qalabka ITga oo dhamaystiran iyo mashaariicaha yar-yar ee dayactirka anteenooyinka.